यी हुन २०१९ मा नयाँ रेकर्ड बनाउन सफल बलिउड फिल्म, कुनले कति कमाए ? | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
यी हुन २०१९ मा नयाँ रेकर्ड बनाउन सफल बलिउड फिल्म, कुनले कति कमाए ?
पुस १०, २०७६ | आजको अर्थ
हाउसफुल ४ः बलिउडका हिट फिल्म ‘हाउसफुल’को चौथो सिक्वेलको रुपमा यो फिल्म निर्माण भएको हो । अक्षय कुमार, कृति सनोन, रितश देशमुख, कृति खरबंदा, बबी देओल लगायतको अभिनय रहेको फिल्म दर्शकलाई भरपुर मनोरन्ज दिन सफल मानिएको छ । फिल्मले बक्सअफिसमा २०५.४९ करोडको आम्दानी गरेको छ ।
उरीःदेशभक्तिले ओतप्रोत फिल्म उरीले अभिनेता विक्की कौशलको करियरलाई रकेटको रफ्तार दिलाएको छ । भारतीय सेनाले पाकिस्तानमा सर्जिकल स्ट्राइक गरेर उरीमा गरेको आतंक हमलाको बदला लिएको बिषयमा फिल्म बनेको थियो । फिल्मले २४४ करोड आम्दानी गर्न सफल भयो ।
वारः टाइगर श्राप र ऋतिक रोशन अभिनित वार यस बर्षको सबैभन्दा हंगामा गर्ने फिल्म साबित भयो । फिल्मले बक्सअफिसमा सफलताको नयाँ रेकर्ड समेत बनाएको छ । फिल्मले वर्षको सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने फिल्मको रेकर्ड कायम गर्नुको साथै आमिर खानको ठग्स अफ हिन्दुस्तानले बनाएको सबैभन्दा बढी ओपनिङ फिल्मको रकेर्ड समेत तोडेको छ । फिल्मले ओपनिङ ब्यवसायनै ५०.६१ करोड गर्न सफल भएको थियो । यसको कुल आम्दान २९२.७१ करोड रहेको छ ।